Shiinaha DuoDuo isku-laabma shandadaha tarooli DX3015 Fudud oo Aluminium Isku-darka ah iyo La-qaadan karo Laabi Dolly soo saaraha iyo alaab-qeybiye | Duoduo
Tarooli shandado isku laabma DuoDuo DX3015 Lightweight Aluminium isku duuban iyo la qaadan karo laab laab Dolly
Cabbirka Furmay: 27.5x31x95CM
Cabbirka La Laabay: 39.5x27x8.5CM
Baaxadda Saxanka: 27x22CM
Awoodda: 20 KGS
Xirmo: 10pcs halkii kartoon
Xajmiga kartoonka: 55x42x29CM
Gaari yar oo shandado isku laabmi kara, waa mid aad ufudud oo noqon kara laabma, waxaa lagu ridi karaa boorsadaada.
Qaabdhismeedka casriga ah ee casriga ah oo muujinaya khadadka nadiifka ah iyo abaabulka qarsoon.
Boorsooyinka suunka xarkaha suunka taageerada oo la hagaajin karo waxayna ka hortageysaa wareejinta.
Gawaarida gawaarida culus ee ballaaran ee hagaajinta maaraynta.
Suunka taageerada wuxuu fidiyaa ku dhowaad laba jibbaar dhererkiisa si uu u xajiyo culeysyo cabbirro badan oo kala duwan ah.
Isku laabma si loogu qaado gaadiid fudud iyo keydinta. Isku laabmi kara boos yar oo keyd ah.
Samee Hawshaada Guurguuraha Fudud: Taayirrada rooga weyn ee dhaadheer waa kuwo waara oo aad u deggan oo ka dhigaya qabashada iyo dhaqaajinta gaadhigu mid fudud.
Xadhkaha Laastikada: Fududeeyaha dhaadheer ee loo yaqaan 'Bungee Cords' waxay fidsan yihiin ku dhowaad laba jibbaar dhererka si ay u qabtaan culeysyo cabbirro kala duwan leh. Xarkaha taageerada ee hagaajin kara bagaashka kana ilaali wareejinta. Saldhiggu wuxuu ka samaysan yahay shey adag oo cimri dherer leh si ammaan loogu qaado boorsooyinka, baakadaha, sanduuqyada.
Weli xanuun miyaa in rarku aad u culus yahay? Weli waxaa dhib ku haya shandado aad u badan oo safar ganacsi ah? Wali ma ka xanaaqsan tahay dhibaatada dukaamaysiga dukaamaysiga? Waxaad ubaahantahay gaari-gacmeedkan yar ee la qaadan karo oo yar-yar, laab fudud oo ku rida boorsadaada.
Waxay kuxirantahay garoonka diyaaradaha iyo diyaaradaha aad raaceyso, waxaa laga yaabaa in lagaa rabo inaad boorsooyinkaaga ku hubiso boorsadaada. Haddii aadan qorsheyneynin inaad hubiso wax boorsooyin ah, waxaad u baahan doontaa inaad shirkaddaada ka xaqiijiso haddii gaariga loo oggolaan doono iyo in kale. Si safarku waxyar uga fududaado, waxaad u baahan tahay inaad ka fiirsato helitaanka shandad shandado isku laaban. Waxyaabahani waxay ka dhigayaan saadka safarka mid aad u fudud. Wareegtada Shandadaha Isku-laabma ee Isku-dhafan oo adag, dhisme miisaan fudud, ayaa furmaya oo xirmaya ilbiriqsiyo siinaya dhaqdhaqaaq fudud. Giraangiraha dhererkoodu culus yahay ee loogu talagalay hagaajinta hagaajinta Boorsooyinka xarkaha suunka taageerada oo la hagaajin karo waxayna ka hortagtaa wareejinta Si nabadgelyo leh u rarta boorsooyinka, sanduuqyada, xirmooyinka
Hore: Tarooli shandado isku laabma DuoDuo DX3013 la Wheels la qaadi karo Cart culus Shandada Aluminiumka khariban
Xiga: DuoDuo Duty Hand Druck Truck LH5001 Dual Handle Hand Truck
Tarooli shandado duoDuo DX3009
Tarooli shandado isku laabma DD3005 la Add ...
Tarooli shandado isku laabma DX3002 laab laab D ...